Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Kanada in ay u furto xuduudaha safarleyda si buuxda loo tallaalay
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Duulimaadyada caalamiga ah ee sida rakaabka waxaa loo oggolaan doonaa inay ka degaan shan garoon diyaaradeed oo dheeri ah oo ku yaal Kanada.
Dawladdu waxay ku talo jirtaa inay u furto xudduudaha Kanada safar kasta oo si buuxda u tallaalan oo dhammeystiray tallaalka buuxa ee tallaalka ay aqbashay Dowladda Kanada ugu yaraan 14 maalmood kahor soo gelitaanka Kanada.
Dhamaan socotada waa inay adeegsadaan ArriveCAN (barnaamij ama bog internet) si ay u soo gudbiyaan macluumaadka safarkooda.
Dhamaan socotada, iyadoon loo eegin heerka tallaalka, weli waxay u baahan doonaan kahor-gelitaanka natiijada baaritaanka kelli ee COVID-19.
Xukuumadda Canada waxay mudnaanta siineysaa caafimaadka iyo badbaadada qof walba oo reer Kanada ah iyadoo la qaadanayo qaab ku saleysan halista iyo cabbiraadda dib-u-furidda xuduudahayaga. Shaqada adag ee reer Kanadiyaanka, sare u kaca heerka tallaalka iyo hoos u dhaca kiisaska COVID-19, Dowladda Kanada waxay awood u leedahay inay horay ugu socoto tallaabooyinka xuduudaha ee la isku hagaajiyay.
Sebtember 7, 2021, waa haddii xaaladda cudurrada faafa ee gudaha ay weli wanaagsan tahay, Dowladdu waxay ku talo jirtaa inay u furto xuduudaha Kanada safar kasta oo si buuxda u tallaalan oo dhammeystiray tallaalka buuxa ee tallaalka ay aqbashay Dowladda Kanada ugu yaraan 14 maalmood ka hor intaan la gelin Kanada iyo kuwa buuxiya shuruudaha gelitaanka gaarka ah.
Tallaabada koowaad, laga bilaabo Ogosto 9, 2021, Canada waxay qorsheyneysaa inay bilowdo ogolaanshaha soo gelitaanka muwaadiniinta Mareykanka iyo deganayaasha joogtada ah, oo hadda degan Mareykanka, isla markaana si buuxda loo tallaalay ugu yaraan 14 maalmood ka hor gelitaanka Kanada socdaal aan muhiim ahayn. Tallaabadan hordhaca ah waxay u oggolaaneysaa Dowladda Kanada inay si buuxda u hawlgasho tallaabooyinka xuduudaha ee la hagaajiyay ka hor Sebtember 7, 2021, waxayna aqoonsan tahay xiriiro badan oo dhow oo u dhexeeya Kanadiyaanka iyo Mareykanka.
Iyada oo ay ku xiran tahay ka-reebitaanno xaddidan, dhammaan socdaalayaashu waa inay adeegsadaan ArriveCAN (abka ama bogga internetka) si ay u soo gudbiyaan macluumaadkooda safarka. Haddii ay xaq u leeyihiin inay soo galaan Kanada oo ay la kulmaan shuruudo gaar ah, socotada buuxda ee la tallaalay looma baahna inay karantiil ku noqdaan markay yimaadaan Kanada.
Si loo sii xoojiyo tillaabooyinkan cusub, Gaadiidka Kanada wuxuu ballaarinayaa baaxadda Ogaysiiska jira ee Airmen (NOTAM) oo hadda ku hagta duulimaadyada caalamiga ah ee duulimaadyada rakaabka ee afar garoon diyaaradeed oo Kanada ah: Montréal-Trudeau International Airport, Toronto Pearson International Airport, Calgary International Airport, iyo Madaarka Caalamiga ah ee Vancouver.